उपेन्द्रमाथि पूर्वसहकर्मी अभिषेकको आरोपै आरोप, भन्छन्- आफ्नै मुख्यमन्त्रीलाई कारवाही गर्दैछन्
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्नै नेतृत्वमा कम्युनिस्टको सरकारमा सहभागी हुनुभएको छ । मधेश आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता भए पनि जुन तरिकाले उहाँले आफूलगायत पार्टीलाई कम्युनिस्टका अगाडि आत्मसमर्पण गर्नुभएको छ, मधेशी जनता र शहीदहरूको शहादतसँग ठूलो धोखाधडी गर्नुभएको छ ।
हुन त कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिको अन्तिम ध्येय भनेको सत्ता प्राप्ति नै हुन्छ । तर अहिले मधेश आन्दोलन र त्यसका एजेन्डा टुंगो लागेका छैनन् । उहाँ यति आतुर हुनुभयो कि सत्ताप्रति उहाँको मोह छरपस्ट भएको छ । उहाँको अहिले सरकारमा जानु समय सान्दर्भिक भएन । जानु नै थियो भने राजपासँग सहकार्य गरेर जानुपर्थ्यो ।
संविधान संशोधनको कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । कुनै पनि कम्युनिस्ट नेताले संविधान संशोधन हुन्छ भनेर भनेका छैनन् । देखाउनका लागि २ बुँदे सहमति गर्नुभएको छ । सहमति गर्न त उहाँ माहिर हुनुहुन्छ । २२ बुँदे, ८ बुँदे, ११ बुँदे, ४ बुँदे यस्ता अनेकौं बुँदे सहमति गर्नुभएको छ । तर मधेशी जनताले के पाए ?
मधेशको सवाल हल नहुँदै उहाँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुभयो । स्थानीय चुनावमा गएपनि संसदीय चुनाव र आमचुनाव संविधान संशोधन नभएसम्म हुँदैन भनेर हामीलाई पार्टीमा प्रशिक्षण दिनुहुन्थ्यो । तर अहिले सामान्य स्वास्थ्यमन्त्रीको लोभमा ती सबै कुरालाई उहाँ आफैंले लत्याइदिनुभयो ।
सत्तामा नगएर कम्युनिस्ट सरकारलाई बाहिरबाटै समर्थन गरिरहेको भए संविधान संशोधन हुनसक्थ्यो । तर अब त्यो बार्गेनिङ पावरलाई एकदमै कमजोर बनाउनुभयो । अब राजपा एक्लैले पनि केही गर्न सक्दैन ।
उपेन्द्रजीको स्कूलिङ नै कम्युनिस्टबाट भएको हो । शुरुमा एमाले र पछि माओवादी हुँदै मधेशको राजनीतिमा केन्द्रित हुँदै फोरम गठन गर्नुभएको थियो । विगतमा सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनमा समेत उहाँले कतिपय ठाउँहरूमा एमालेसँग सहकार्य तथा तालमेल र गठबन्धन समेत गर्नुभएको थियो । कम्युनिस्टप्रति उहाँको मोह अहिलेसम्म पनि कायमै छ । तर मधेशका जनताले कहिल्यै पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई पचाउन सक्दैनन् । त्यहाँका जनता लोकतन्त्रवादी हुन् भन्ने हो भने उपेन्द्रजीले मधेशको स्वभावविपरीत एक किसिमले उल्टो राजनीतिको शुरुवात गर्नुभएको छ ।
उपेन्द्रजीको व्यक्तित्व एकदमै अविश्वसनीय रहँदै आएको छ । उहाँमाथि यदि कसैले विश्वास र भरोसा गर्छ भने त्यो व्यक्तिको सबैभन्दा ठूलो भूल हुनेछ । उहाँको स्वभाव कस्तो छ भने उहाँ एक्लै नेतृत्व गर्ने ‘वान म्यान शो’ अर्थात् पार्टीभित्र आफू एक्लै नेता हो, बाँकी सबै केही पनि होइनन् भन्ने रहँदै आएको छ । सामूहिक नेतृत्वको राजनीति उहाँको ’ब्लड’मै छैन । एउटा खास जातिप्रति मात्र केन्द्रित हुने उहाँको स्वभाव नै हो । मधेसमा अन्य थुप्रै जातजाति छन् । तर उहाँको बानी नै एउटा मात्र यादव समुदायप्रति केन्द्रित हुने र प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति रहेको छ । त्यही कार्यशैलीलाई मैले मन नपराएर संघीय समाजवादी फोरम छाडेको हो । त्यहाँ म उपमहासचिव थिएँ ।
मलाई लाग्छ कि मैले सही समयमा उक्त पार्टी छाडेर धेरै नै राम्रो गरेको छु । चाहेको भए मैले त्यो पार्टी नै पनि फुटाउन सक्थेँ । पार्टीभित्र अलग्गै एउटा धार बनाउन सक्थेँ । तर नेपाली कांग्रेस जो एउटा लोकतन्त्रवादी शक्ति हो, त्यसमा प्रवेश गरेँ । जनताले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्‍यो र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट पुनः मलाई जनताले संसदमा पठाएको छ । त्यसकारण पनि मेरो निर्णय एकदमै सही थियो भन्ने कुराको मधेशी जनताले नै निर्वाचनमा मलाई मतदान गरेर पुष्टि गरिदिएका छन् ।
उपेन्द्रजीको ध्यान संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने शतप्रतिशत प्रतिबद्धता कहिल्यै पनि देखिएन । किनभने उहाँ कम्युनिस्टप्रति ज्यादै नै आकर्षित हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो पार्टीको अधिवेशनमा पनि चाइनिज प्रतिनिधिलाई बोलाउनुभएको थियो । भर्खरै आफ्ना पार्टीका नेता तथा सांसदलाई चीन भ्रमणमा पठाउनुभएको छ । उहाँ आफैं पनि परराष्ट्रमन्त्री हुँदाकै बखतमा चीनसँग थुप्रै सम्झौता गर्नुभएको थियो । चीन र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीसँग उहाँको लगाव बढी नै देखिन्छ ।
उपेन्द्रजी संघीय सरकारमा गइसकेपछि उहाँको पहिलो अट्याक अब राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालप्रति केन्द्रित हुन्छ । थुनामा रहेका राजपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई नछुटाएर आफ्नो पार्टीेका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहा गराउनेतर्फ लाग्नुहुन्छ । संविधान संशोधनको सवालमा मात्र नागरिकतामा सामान्य संशोधन गराएर आफूले संविधान संशोधन गराएको भन्दै ‘फेस सेभिङ’ गर्नुहुन्छ । अहिले उहाँ सरकारमा जानुको मुख्य उद्देश्य भनेको लामो समयका लागि सरकारमा गएर पावरमा आउने र अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने नै हो । पार्टी चलाउन पनि पैसा चाहिन्छ । त्यसकारण मालदार मन्त्रालय उहाँले रोज्नुभएको हो । त्यो पाउनु पनि भएको छ ।
उहाँ नेता भइसकेपछि व्यक्तिगत रूपले सम्पत्ति पनि धेरै जोड्न सफल हुनुभएको छ । विराटनगरमा २ वटा घर र काठमाडौंमा फ्ल्याट समेत लिनुभयो । मधेश आन्दोलन हुनुभन्दा पहिलेसम्म जो मानिसलाई काठमाडौंसम्म जानका लागि टिकट किन्ने हैसियत हुँदैनथ्यो तर, अहिले त्यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट जोड्नुभयो ? मधेशी जनतालाई पटक–पटक आन्दोलनमा उचालेर गोली ठोकाउनुभयो र, आफू चाहिँ सम्पत्ति जोड्नतर्फ लाग्नुभयो । उहाँले जहिले पनि अनैतिक राजनीति गर्दै आउनुभएको छ । जनताले प्रतिकार गर्‍यो भने उहाँ अब त्यही मधेशी जनताप्रति ठूलो ‘एटम बम’ भएर पड्किनुहुन्छ । सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले उहाँको सम्पत्तिबारे छानबिन गर्नु आवश्यक छ ।
उहाँलाई उहाँका चाटुकारले मधेशको मसिहा नै पनि भन्ने गर्थे । तर म पार्टीमा रहुन्जेलसम्म पनि उहाँलाई कहिल्यै मसिहा भनिनँ । मधेश आन्दोलन मधेशी जनताले अधिकार प्राप्त गरोस् भन्ने उद्देश्यले कहिल्यै पनि गर्नुभएन । उहाँले आफू नेताको रूपमा कसरी स्थापित हुने भन्नेतर्फ मात्र लाग्नुभयो । जहिले पनि सत्तामा जानका लागि मधेश आन्दोलनलाई उहाँले बार्गेनिङ मात्र गर्नुभयो । अहिले पनि उहाँले त्यही बार्गेनिङ गरेर सत्तामा पुग्नुभएको छ । शक्तिशाली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री साथ प्रोटोकलमा तेस्रो वरीयता पाउनुभएको छ ।
सरकारमा गएपनि उहाँले राजेन्द्र श्रेष्ठलाई लग्नुभएन । मन्त्रीमा जान श्रेष्ठको नाम चर्चामा रहेपनि उहाँलाई लागिएको छैन । त्यसकारण अशोक राई असन्तुष्ट देखिएका छन् । पार्टीभित्र ठूलो असन्तोष उत्पन्न भएको छ । रामसहाय यादवजस्तो व्यक्तित्वलाई काखापाखा गरिएको छ । रेणु यादवलाई विभेद गरिएको छ । महिला नेतृत्वलाई उपेक्षा गरिएको छ ।
फोरम नेपाल र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकता हुँदा बराबरको भागबण्डा गर्ने सहमति गरिएको थियो । तर राजेन्द्र श्रेष्ठको नाम चर्चामा रहेपनि सरकारमा को–को जाने भन्ने विषय छनौट गर्ने निर्णय गराउन आफैँमा अधिकार लिनुभयो र, श्रेष्ठलाई किनारा लगाउनुभयो । त्यो पार्टीमा ठूलै असन्तुष्टि देखिएको छ ।
उपेन्द्रजीले अब सबैभन्दा पहिले २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई कारवाही गरेर मुख्यमन्त्रीबाट हटाउनुहुन्छ । राउतलाई हटाउँदा मुस्लिम समुदाय आक्रोशित हुनेछन् । त्यसकै उत्तरस्वरूप मुस्लिम समुदायबाटै मोहम्मद इश्तियाक राईलाई उहाँले संघीय सरकारमा लैजानुभएको छ । त्यो पूर्व योजनासहित उहाँले राईलाई लैजानुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री राउतले २ नम्बर प्रदेशमा ठूलै लोकप्रियता कमाउन सफल हुनुभएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आउँदा संविधान विभेदकारी रहेको भनेर सम्बोधन गर्दा राउतले मधेशमा धेरै चर्चा कमाउनुभयो । राउत मधेशमा स्थापित नेताको रूपमा लोकप्रिय हुँदै जानु उपेन्द्रजीलाई पचेन । त्यसपछि उहाँले राउतको विकल्प खोजी गर्नुभएको हो । उहाँको बढ्दो लोकप्रियताका कारण आफू असुरक्षित हुने र मधेशमा राउत नै नेताको रूपमा स्थापित हुने देखेपछि उपेन्द्रजीले उहाँलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउनुहुन्छ । त्यो नै उहाँको अहिलेको ‘गेम प्लान’ हो ।
कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाएर आफ्नो पार्टी सरकारमा त्यहाँ रहोस् र केन्द्र तथा प्रदेशमा सरकार चलिरहोस् भन्ने उहाँको ‘गेम प्लान’ हो । उपेन्द्रजीले जे पाउनु थियो पाइसक्नुभयो । अब उहाँको ओरालोको दिनगन्ति शुरु भइसकेको छ ।
राजपाले के गर्छ ? त्यो हामी पर्खिरहेका छौं । यदि राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सडकमा आयो भने नेपाली कांग्रेसले राजपासँग सहकार्य गरेर संघर्षलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।
(नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेकप्रताप शाहसँग लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले गरेको कुराकानीमा आधारित । शाह कांग्रेस प्रवेश गर्नुअघि फोरम नेपालका उपमहासचिव थिए ।)